Efa voafaritra ao amin'ny lalàmpanorenana fa tapitra ny fe-potoana ho an'ny fitondrana teo aloha ka mila hajaina izany, hoy izy. Miara-manohana ny tsy fanemorana ny fifidianana koa i Roland Ratsiraka sy Jean Ravelonarivo
ZANAK’I MAMY BASTA
Nilaza i Mami Basta fa mbola mistery tanteraka aminy ny nahafatesan-janany. Ny antony dia satria mbola niresaka tsara izy mianaka ny alina, alohan’ny hatorian’io tovolahy 23 taona io. Ho an’ny polisy dia mampiahiahy hatrany rehefa misy ny olona izay hita faty mihatonna toy izao. Raha tsiahivina, ny marainan’ny alahady teo no hita nihantona tamin’ny fehikibony teo amin’ny fefy io tovolahy io. Mbola nisy aina kely izy ary navotana saingy tsy tana intsony.
Vaky tanteraka ny ady eo amin’ny federasionan’ny baolina kitra sy ny mpilalao vitsivitsy ao amin’ny Barea. Ny voalohany dia manenjika ny kapiteny Faneva Ima sy Bolida ny amin’ny fizarana ny vola nomen’i Rivo Rakotovao izay tsy araky ny tokony ho izy. Torak’izany koa, ny amin’ny fiverenan’ny mpilalao any Lafrantsa izay tsy nanaraka ny fiaramanidina tokony ho izy, satria izay tian’izy ireo no nandehanana. Mitady izay fomba rehetra hanesorana ireo mpilalao ireo ao anatin’ny ekipa ny Federasiona ankehitriny.
Efa misy trakta mandeha amin’izao fotoana ary izany dia miangavy ny dahalo izay naka an-keriny ilay fianakaviana izay nisy zaza tany Ambatofinandrahana. Mba havereno ilay zaza fa tsy hiantso sy tsy hitaraina amin’ny tompon’andraiktira intsony izahay fa aleo hitaraina mivantana aminareo dahalo. Izany no hita tao anatin’ny trakta ary tsy mbola nisy endrika fiangaviana toy izay hatramin’izay teto amin’ny tantaran’ny firenena. Mafy loatra ny asan-dahalo ankehitriny.
MPITAINGINA MOTO MATY
Maty nifandona tamin’ny Sprinter ireo roa lahy nitaingina moto tamin’ny lalam-pirenena voalohany. Lehilahy iray sy ny rafozany ireo nitaingina moto ireo omaly maraina ary tao anaty fiolanana no nifanehatra tamin’ilay fiara fitaterana. Maty tsy tra-drano ilay lehilahy ary nezahina navotana tao amin’ny hopitalin’i Miarinarivo kosa ilay rafozany saingy tsy tana intsony ny ainy. Notanana avy hatrany ny mpamily ilay taksibrosy.
Afaka mitombo iray alina isa ny mpianatra eny Ankatso manomboka amin’ny taom-pianarana ho avy. Ny anton’izany dia mitombo koa ny isan’ny sampam-pianarana izay efa naorina eny an-toerana amin’izao fotoana. Manao fanentanana ny mpianatra izay vao nahazo bakalorea ny tompon’andraikitra mba hiditra eny ary torak’izany koa ireo izay efa mianatra amin’ny oniversite tsy miankina ka tsy marim-pototra ny baoritra omena.
ZAZA VOATIFITRY NY BASY
Zaza roa no naratra voatifitry ny basy tao amin’ny tokantrano iray tao Morarano-Gara. Nandritry ny fanafihan’ny jiolahy ny trano fonenan’izy ireo no mba niezaka izy mirahalahy kely ny nanohitra ireo olon-dratsy kinanjo avy hatrany dia notifirin’ireo. Mbola naratra vokatry ny fipitihan’ny bala ihany koa ny renin’izy ireo. Isan’andro izany dia misy hatrany ny olona na maty na naratra vokatry ny fanafihan-jiolahy izay tsy tana intsony ankehitriny.
MPIJERY VALINA BAKA NISY NANENDAKA